City of Durban – The Ulwazi Programme
Maningi amagama emigwaqo, izakhiwo nezindawo ashintshiwe kusukela ngokhetho luka-1994. Uzokhumbula ukuthi eminyakeni eyedlule kuke kwaba undabuzekwayo ukushintswa kwamagama emigwaqo yeTheku namaphethelo. Kwaba nemibono eyahlukene evezwa ngabantu, bebodwa abathi asikho isidingo sokumosha izimali ngalolu shintsho abanye bethi lolu shintsho lungaba nomthelela ongemuhle kwezomlando. Ekugcineni ashintshiwe amagama amaningi aqanjwa ngezinqalabutho zomzabalazo. Kamuva ukushintshwa kwe-Port Elizabeth yabizwa nge-Gqeberha … Read more